🥇 ▷ Sawirka ayaa muujinaya in Xiaomi Redmi 8 iyo 8A ay soo gaareen 1-da Oktoobar ✅
Sawirka ayaa muujinaya in Xiaomi Redmi 8 iyo 8A ay soo gaareen 1-da Oktoobar
Xiaomi waxay horeyba u siisay dhamaan dareenkii ay ka laheyd inay siiso Redmi range note sanadkaan. Xusuusnow in bishii la soo dhaafay loo bandhigay adduunka Redmi Note 8. Si kastaba ha noqotee, heerarka dhaqaale ee ugu badan ee shirkadan, Redmi 8 iyo Redmi 8A wali ma helin muujinta rasmiga ah, in kasta oo ay jiraan warar badan oo xan ah oo ku baahinaya internetka. Hadda waxaa jira ribo cusub oo gaar ah oo laga helay 91mobiles. Ficil ahaan waxay muujineysaa taariikhda la sii daayay Oktoobar 1deeda.
Teaserku wuxuu sidoo kale soo jeedinayaa 48MP dareemaha kaameeraha. Daabacaadda ayaa u maleyneysa inay tahay inay tahay Redmi 8 Pro.
Laakiin xaggee waxhuba ku jiraan? Telefannadan casriga ahi waxay heleen dhamaan aqbalaad kahor intaysan bilaaban. Tani waxay soo jeedineysaa in goobta hore u dhow. Si kastaba ha noqotee, ma jiro hab lagu ogaado haddii taariikhda saxda ah ee aan kor ku soo xusnay ay 100% sax tahay.
Redmi 8A ayaa dhowaan ka soo muuqday TENAA oo leh kamarad gadaal ah isla markaana aan lahayn akhristaha faraha. Sawir hore (oo loo malaynayay Redmi 8A) ayaa hadda u muuqda inuu iska leeyahay Redmi 8.
Nooca 8 wuxuu leeyahay laba kaamirooyin gadaal ah iyo akhristaha farta-dhexda taagan.
Redmi 8A waxay leedahay shaashad 6.2 inji HD + ah, 4 GB RAM, batteriga mAh 5,000 iyo dhamaan astaamaha kale ee Redmi 7A. Waxaa la rumeysan yahay inay kujirto ‘Snapdragon 439 chipset’. Si kastaba ha noqotee tani waa mala-awaal saafi ah.
Sida moodada qaaliga ah, waa inay lahaataa qeexitaanno la mid ah Redmi 8A, sida ay soo warisay TENAA.
Redmi 8 Pro waa wax qarsoon oo weyn. Wali kama aysan soo muuqan meelna sidaas oo kale, waxaan shaki ka qabnaa inay jirto. Gaar ahaan maadaama Redmi aysan wali sii deynin Redmi 7 Pro weli.
Waa inaan sugno warar dheeraad ah. Ugu yaraan waxaan rajeynayaa inaad ku sasabto qiimo soo jiidasho leh.